कमेडी क्वीन भारती सिंह आमा बन्दै? गरिन् यस्तो खुलासा – Online Saptarangi
October 20, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on कमेडी क्वीन भारती सिंह आमा बन्दै? गरिन् यस्तो खुलासा
भारतीय हास्य अभिनेत्री भारती सिंहले आफ्नो गर्भावस्थाको बारेमा खुलासा गरेकी छिन् । उनी इंडियाज बेस्ट डांसर शो लाई होस्ट गरिरहेकी छिन् । पछिल्लो समय उनी सो मा आफ्नो पति हर्ष लिम्बाचियासँग देखिएकी थिइन् । त्यस एपिसोडमा भारतीले उनको गर्भावस्थाको योजनाको बारेमा बताइन् । भारती सिंह २०२१ मा आमा बन्ने सोचमा छिन् ।
हर्षसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दै भारती सिंहले भनिन्, जबदेखि म सम्झिन सक्ने भएँ र साँचो प्रेम बुझ्न थालें, हर्ष मेरो जीवनमा प्रेमको पर्यायवाची भएको छ । मैले मेरो दिन मेरो भगवान (हर्ष) को अनुहार हेरेर शुरू गर्दछु । म मेरो जीवनको आनन्द उ बिना एक पल्ट कल्पना गर्न सक्दिन ।
भारतीले कार्यक्रमका जर्जहरू टेरेंस लुइस, मलाइका अरोड़ा, फराह खान र गीता कपूरसँग कुराकानीको क्रममा भनिन् कि हर्ष ब्यूँ’झनु अघि म हरेक बिहान उसको लागि तयार राख्छु । मलाई थाहा छ कि उसकी आमाले उनलाई यो जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ । म हर्षको श्रीमती र आमा दुबैको भूमिका खेल्छु ।
यस पछि, गर्भवती योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्दा, एक डमी बच्चा हातमा लिएर भारतीले भनिन्, म राष्ट्रिय टिभीमा यो प्रतिज्ञा गर्छु कि यो बच्चा २०२० मा नक्कली हो, तर २०२१ मा यो बच्चा वास्तविक हुनेछ ।
भारती सिंहले पनि फराह खानको आशिष् लिइन् र उनलाई एक प्यारी छोरी हुनु पर्छ भनेर प्रार्थना गर्न आग्रह गरिन् ।